Mizotra mankany amin’ny fandraràna an’ilay antoko politika mpomba ny Kiorda i Tiorkia · Global Voices teny Malagasy
Nankatoavin'ny Fitsaran'ny Lalàm-panorenana ny fitoriana iray handravana ny antoko HDP
Voadika ny 25 Jona 2021 3:13 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, Italiano, English
Mpitatrika ny Antokom-Bahoaka Demaokratika, Selahattin Demirtas, tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2015 tao Tiorkia. Sary an'i Hilmi Hacaloğlu, sehatra ho an'ny daholobe, tao amin'ny Wikimedia Commons.
Tamin'ny Martsa 2021, i Bekir Şahin lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny Fitsaràna Mpandrava Didy ao Tiorkia no nametraka voalohany ilay fiampangana ahitàna pejy miisa 843, iampangana ilay antoko ho mifandray tendro amin'ilay vondrona mpihoko voaràran'ny lalàna Kurdistan Worker's Party (PKK). Ny PKK dia voatondro ho toy ny vondrona mpanao asa fampihorohoroana ao Tiorkia sy ireo Tandrefana mpiaradia aminy, isan'ireny i Etazonia sy ny Fiombonambe Eorôpeàna. Takian'ilay fiampangàna ihany koa ny hangiazana ny fananan'ilay antoko sy hanakanana ireo mpikambana mihoatra ny 400 ao aminy ho raràna tsy ho afaka hanao raharaha pôlitika intsony amin'ny hoavy. Lavin'ny HDP ny fisian'ny fifandraisana tahaka izany.
Raha ireo mpitsikera milaza hoe ampiasain'ny filohan'i Tiorkia sy ny Antoko AKP – izay mitondra ankehitriny – ny fitsaràna antampony mba hamoretana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny pôlitikan'ny governemantany. “Lasa nihen-danja kokoa ho fitaovana eo an-tananan'ny mpanatanteraka ireo mpampanoa lalàna sy ny tribonaly, ampahan'ny ady fahefana ao anatin'ny fanjakàna,” hoy i Emma Sinclair Webb, zokiolona mpikaroka ao Tiorkia ho an'ny Human Rights Watch, manana ny foibeny ao New-York, raha nitafa tamin'ny Bianet izy.
Taorian'ny nametrahana azy voalohany tamin'ny Martsa, nolavin'ny Fitsaran'ny Lalàm-panorenana ilay fiampangana, tamin'ny fitanisàna hoe tsy ampy ireo pitsopitsony. Volana efatra aty aoriana, ny 7 Jona dia naverin'ny fampanoavana indray ilay raharaha.
Ho an'ny fikambanana Turkish News T24, izao no lazain'ilay fiampangàna:
Olona 108 no notorian'ny lehiben'ny fampanoavana ho tomponantoka niavian'ilay hetsipanoherana nahafatesana olona tamin'ny 2014. Araka ny fitateran'ny VOA azy, ny fandavan'i Ankara tsy hanohana ireo Kiorda mpiantafika no nampipoaka ireny hetsipanoherana ireny, dia ireo Kiorda niharan'ny fahirano nataon'ilay lazaina hoe vondrona Fitondrana Islamika, tao amin'ny tanàna siriàna ao Kobane, any amin'ny sisintany Tiorka. Tamin'ny Martsa ny fisamborana farany indrindra no nitranga, rehefa notànana ireo mpikambana zokiolona, telo raha kely indrindra, avy amin'ny HDP. Andro telo talohan'io, nameno antontan-taratasy fitoriana ny lehiben'ny fampanoavana niaraka tamin'ny Fitsaran'ny Lalàm-panorenana, mba handravana ny HDP.
Vonona ny HDP ny hitolona hanohitra ilay fikasàna tsy ara-dalàna handrava ny antoko. “Tsy hoavelanay horavana ny HDP, hiaro ny HDP izahay. Tsy hitsahatra ny hitombo ny HDP,” hoy i Mithat Sancar, filoha mpiara-mitantana ny antoko tao anaty fanambaràna iray. Nahazo vato enina tapitrisa ilay antoko nandritra ny fifidianana savaranonando tamin'ny 2018 ary lasa ho ny fahatelo lehibe indrindra ao anatin'ny antenimiera any Tiorkia.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, niaritra tsindry hazolena maro ny antoko. Maro ireo zokiolona mpikambana ao amin'ny antoko, isan'izany ilay filoha mpiara-mitantana taloha, Selahattin Demirtaş, no nosamborina noho ny fiampangàna mifandraika amin'ny resaka asa fampihorohoroana.
Araka ny tatitry ny Human Rights Watch, isan'ny vesatra anenjehana an'i Demirtaş ny “maha-mpikambana anaty fikambanana mpampihorohoro,” “fanaovana fampielezankevitra fampihorohoroana,” ary heloka bevava hafa maro. Raha voaheloka izy, fanamelohana ho faty no sazy miandry an'i Demirtaş. Ny 20 Novambra 2018, ny Fitsaràna Eorôpeàna dia “namoaka didy tsy fahita firy nilaza fa nisy fanitsakitsahana ny andininy faha-18 ao anatin'ny Fifanarahana Eorôpeàna, izay midika fa notohizana noho ny antony tsy nambara ny fitazonana an'i Demirtaş ary araka izany dia fanararaotana fahefana.”
Andro vitsy taorian'ny nanafihan'ny lehilahy iray nirongo fiadiana ny foiben'ny antoko tao an-tanànan'i Izmir, no nivoaka ilay didy tamin'ny 21 Jona. Fanafihana nahafaty an'i Deniz Poyraz mpikambana ao amin'ny HDP. “Niditra tao amin'ilay tranobe aho ary fikasako ny hamono izay olona rehetra mety ho tao amin'ilay birao tamin'izay fotoana izay, tsy asiako fanavahana, dia notifiriko daholo ny manodidina,” hoy ilay lehilahy, Onur Gencer, araka ny lazain'ny Hurriyet Daily News.
Nalaky tamin'ny fiampangàna an'i Poyraz ho mpampihorohoro ilay mpitarika ny Antoko Hetsika Nasiônalista (MHP) izay mpiaradia amin'ny antoko AKP eo amin'ny fitondrana. “Ambarako anareo hoe iza ilay olona maty, Deniz Poyraz, : izy no tomponandraikitry ny PKK amin'ny fitadiavana sy fampidirana olona avy any ambanivohitra, milisy mpiray tsikombakomba izay mandefa ireo mpomba ny PKK te-ho any an-tendrombohitra,” hoy i Devlet Bahçeli, mpitarika ilay antoko, nandritra ny fihaonana tamin'ny 22 Jona.
Mandritra izany fotoana izany, tao anaty fanambaràna iray, ny HDP miampanga ny AKP sy ny MHP ho tomponantoka tamin'ilay fanafihana:
Lazan'ireo manampahaizana manokana fa henjanin'ny governemanta ny teritery ataon'ny amin'ny HDP alohan'ireo fifidianana hatao amin'nyh 2023. Raha levona ny HDP, azo antoka ny hananan'i Erdogan tombony amin'ny fifidianana ao Tiorkia any atsimo-atsinanana izay ny Kiorda no maro an'isa, izay nifampizaràn'ny HDP sy ny AKP hatrizay.
Ny fanambaràna navoakan'ny Departemantam-Panjakana Amerikàna ho setrin'ny andrana handevona ny HDP, dia manamarika fa ny fanaovana izany dia “mety hampitsimbadika ny safidin'ireo tiorka mpifidy, vao mainka hanohintohina ny demaokrasia ao Tiorkia, ary hanakana ireo olompirenena tiorka an-tapitrisa tsy hahazo izay solontena tena araka ny safidin'izy ireo.”
Tsy misy hafa amin'izay, tao anaty antsafa iray ho an'ny FT, nilaza ilay mpahay siansa pôlitika, Sezin Ozey, hoe “Miteraka fihenjanan-droa ny fitadiavana mpisolo vaika ny ankalana, izay handrebirebena ny saina ho any amina olana hafa mandritra ny fisian'ilay valanaretina ‘coronavirus'”. “Ny fanaratsiana ny HDP dia manampy ihany koa amin'ny fanangolena ireo sisa rehetra ao anatin'ny fanoherana.”